The Ab Presents Nepal » प्राकृतिक विपद् सम्बन्धी पूर्वजानकारी दिँदै टेलिकम !सेयर गरेर सम्पूर्ण लाइ जानकारी देउ !
प्राकृतिक विपद् सम्बन्धी पूर्वजानकारी दिँदै टेलिकम !सेयर गरेर सम्पूर्ण लाइ जानकारी देउ !
काठमाडाैं-: देशका विभिन्न स्थानमा बाढी,पहिरोलगायतका प्राकृतिक विपद्बाट हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल टेलिकमले सम्भावित विपद्सम्बन्धी पूर्वजानकारी सम्प्रेषित गर्नका लागि विशेष भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । टेलिकमले जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँग मिलेर यस्ता सम्भावित विपद् क्षेत्रका बासिन्दालाई मोबाइल मार्फत निःशुल्क सन्देश पठाएर सुरक्षित रहनका लागि सचेत गराउँदै आएको छ’।
टेलिकमले हालै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो साताको अन्त्यसँगै मुलुक भरका प्रायः नदीको बहाव उच्च हुने भएकाले तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको छ। पहाडमा पानी परेमा पहिरो जान सक्ने र तराई डुबानमा पर्नसक्ने कुरालाई मध्य नजर गरी यससम्बन्धी पूर्वजानकारी उपलब्ध गराइन्छ’।
टेलिकम र जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बीचको सहकार्यमा जल तथा मौसमजन्य सम्भावित विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना उपलब्ध गराउन मोबाइल मार्फत एसएमएस प्रवाह गर्ने गरेको । जसअनुसार महाकाली, पश्चिम राप्ती, कन्काई, बबई, कर्णाली, नारायणी, वाग्म ती, कोशी नदी क्षेत्र र हिमाली क्षेत्रका ग्राहकको मोबाइलमा विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना सम्प्रेषणको व्यवस्था मिलाइएको छ’।
यसका लागि टेलिकमले सम्भावित विपद् क्षेत्रका मोबाइल सेवाका ग्राहकहरुको विवरण मौसम विज्ञान विभागलाई उपलब्ध गराइरहेको छ। विभागले ११५५ कोडको प्रयोग गरी विशेषगरी विपद् आउनुपूर्व प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले प्राप्त गर्न सक्ने गरी समूहगत सन्देश (बुल्क एसएमएस)मार्फत आवश्यक जानकारी पठाउने गर्दछ’।
विपद्को पूर्वजानकारीले क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने तथा मानवीय क्षति हुन नदिन वा कम गर्न सकिने भएकाले कम्पनी र जल तथा मौसम विज्ञान विभागबीच सहकार्य गरिएको हो’।